﻿Download Ngwù Ngwaọrụ Asụsụ Microsoft® Office – Igbo from Official Microsoft Download Center
AfrikaansAmpharicAssameseAzeri (Latin)BaskiBengali (Bangladesh)Bengali (India)CatalanDariFilipinoGalicianGujaratiHausaIgboIkinyarwandaIrishisiXhosaisiZuluKannadaKhmerKiswahiliKonkaniKyrgyzMalayalamMalteseMāoriMarathiNepaliOnye AlbaniaOnye ArmeniaOnye BelarusOnye Bosnia (Latin)Onye GeorgiaOnye IcelandOnye LuxembourgOnye Macedonia (Bubu Yugoslav Repọbliki nke Macedonia)Onye Norway (Nynorsk)Onye Serbia (Cyrillic)OriyaPashtoPersianPunjabiQuechua (Peru)RomanshScottish Gaelic - United KingdomSerbian (Cyrillic) - Bosnia and HerzegovinaSesotho sa LeboaSetswana (South Africa)Sindhi - Islamic Republic of PakistanSinhalaTamilTatarTeluguTurkmen (Latin) - TurkmenistanUrdu - PakistanUyghur - ChinaUzbek (Latin)WelshWolofYoruba
Ngwù Ngwaọrụ Asụsụ Microsoft Office - Igbo na-agbakọnye ngosi ọzọ, enyemaka, maọbụ ụmụ ngwaọrụ nnyòcha, ga-agbado ụkwụ n’asụsụ ị na-akwakọnye.
Mgbe emechara nkwakọnye, ike na nhọrọ kemmekọrita Ngwù Ngwaọrụ Asụsụ Microsoft Office - Igbo dị adị site n’ime ụmụ ntinyenọrụ Office na ntinyenọrụ Ihe ndị-ebụzọchọ n’Asụsụ Microsoft Office.
Maka datà kachasị ọhụrụ gbasara ihe ndị achọrọ na Sistèm lèe njikọIhe ndị achọrọ na Sistèm maka Office
Microsoft Windows 8 - OS 32 maọbụ 64 bit
Microsoft Windows 10 - OS 32 maọbụ 64 bit. (Maka ndị nzụta Office 2019 otù ugboro Windows 10 naanị ya bu OS akwadoro)
Matakwa:Biko hụ na ịkwakọnyere Ụmụ ngwù Ọrụ kachasị ọhụrụ maka Sistèm Njiarụọrụ gị iji nyeta nkwàdo zuru ezù maka asụsụ gị.
NgwanròÀgbà ọbụla nke Office 2016 (maọbụ ka ọhụrụ) nchịkọta maọbụ kwụrụonwe nke nwegasịrị Microsoft Excel, Microsoft Lync, Microsoft OneNote, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint maọbụ Microsoft Word ga-akwado Ngwù Ngwaọrụ Asụsụ Microsoft Office 2016 (maọbụ ka ọhụrụ) - Igbo.
Kọmputà na NhàziọruNhàziọru 1.6 GHz nwere nkwado SSE2 maọbụ dị elu karịa; 4GB RAM; 2 GB RAM (32-bit) maọbụ dị elu karịa
Oghere diiskiNa mgbakwụnye oghere diiski ike nke ụmụ ntinyenọrụ Office akwakọnyere na-eji,
4 GB dị adị n’oghere diiski ike.
Ihe ndịọzọ niile achọrọ na sistèm bụgasị otù na nke ntinyenọrụ Office nke iji arụ ọrụ n’iji Ngwù Ngwaọrụ Asụsụ Microsoft Office - Igbo.
Ngwù Ihuọrụ Asụsụ WindowsAkwàdoro ka akwakọnye Ngwù Ihuọrụ Asụsụ Windows kachasị ọhụrụ maka nkwado asụsụ ziri ezi maka Sistèm Njiarụọrụ na ụmụ ntinyenọrụ ngwanrò gị.
Mwube Nchawapụta Mọnịtọ na DPIEkepụtara ọtụtụ ụmụ ọnụndèe iji mee ngụpụta ziri ezi na nchawapụta 1366 x 768. Ọ bụrụ na ọ na-ara gị ahụ ịgụpụta ọnụndèe asụsụ gị biko mezilite mwube ngosipụta gị na nchawapụta a maọbụ fị elu karịa ma ọ dị na mkpà. Biko màta: anyị kwadoro ka i jiri ụmụ ntinyenọrụ Office na mwube DPI difọlt Windows - 96 DPI. N’iji mwube 120 DPI nwere ike ịkpata ahụmiihe òjiarụ Office ọjọọ n’ụfọdụ ụmụ ntinyenọrụ Office site n’ịmụba ụmụ nhà igbe mkparịtaụka Office.
Nhọrọ Rijọn na AsụsụNa mgbakwụnye a kwadoro na Nhọrọ Rijọn na Asụsụ niilenaPanelụ Njizi ka ewubere n’asụsụ Ngwù Ngwaọrụ Asụsụ Office Microsoft - Igbo.
Iji kwakọnye Ngwù Ngwaọrụ Asụsụ a:
Budàta faịlụ Nkwakọnye Ngwù Ngwaọrụ Asụsụsite n’ịpịkịnye njikọ a Budàta Ihenkwakọnye Ngwù Ngwaọrụ Asụsụ
Mgbe Emechara Mbudàta Họrọ Mèbe.
Sòrò ụmụ ntụzịaka n’ihuenyò iji mechaa nkwakọnye ahụ.
Gbanwee ihuọrụ òjiarụ n’asụsụ Ngwù Ngwaọrụ Asụsụ
Mgbe akwakọnyechara Ngwù Ngwaọrụ Asụsụ, i nwere ike ị gbanwe asụsụ ihuọrụ ojiarụ gaa na (ahà asụsụ atụgharịrị) site n’ime ụmụ ntinyenọrụ Office maọbụ site na ntinyenọrụ Ihe ndị-ebụzọchọ n’Asụsụ Microsoft Office.
Iji gbanwee asụsụ ihuọrụ òjiarụ site n’Ihe ndị-ebụzọchọ n’Asụsụ:
GwakeeIhe ndị-ebụzọchọ Asụsụ Office.
Site na ndesịtaHọrọ Ndezi Asụsụ gasị,họrọ asụsụ ndezi gị ma pịkịnye ọdụmbiWube dịka Difọlt.
Site na ndesịtaHọrọ Ngosi na Asụsụ ndị Ènyèmaka,họrọAsụsụ Ngosipụta gịma pịkịnye ọdụmbiWube dịka Difọlt.
Pịkịnye ọdụmbiDỊ MMA.
Iji gbanwee asụsụ ihuọrụ òjiarụ site n’ime ntinyenọrụ Office:
Gàa na Faịlụ, Nhọrọ, ma mèe họrọ Asụsụ .
Mwube asụsụ nke ị họọrọ ga-ebido oge ọzọ i bidoro n’ụmụ ntinyenọrụ Office gị.
Gbanwee asụsụ nsupè
Ngwù Ngwaọrụ Asụsụ Office Microsoft - (Ahà Asụsụ Atụgharịrị) nwere ike gụnye ngwaọrụ nnyòcha n’asụsụ gị. Nke a bụ etu esi agbanwe asụsụ nsupè maka nhọpụta nke ngwe:
Excel: Excel na-eji mwube ndezi asụsụ Keisi Microsoft Office iji chọpụta asụsụ nsupè difọlt. Iji gbanwèe nke a, pịkịnyeFaịlụma mèe pịkịnyeNhọrọ. Pịkịnye nhọrọIme nnyòchama họrọ otu asụsụ nke dị adị site na ndesita asụsụ Ọkọwa okwu.
Outlook, PowerPoint, Word na OneNote: Họrọ ngwe nke ga-amasị gị ime ntule nsupè, pịkịnye Nyòchaa, pịkịnye Asụsụ, ma mee pịkịnye Wube nhọrọ Asụsụ Nnyòcha. Họrọ asụsụ mmasị gị site n’igbe ndesịta ma pịkịnye DỊ MMA.